हात्तीको छावालाई आमाको याद नआ`ओस् भनेर सँगै सुते उ`द्धारकर्ता, सर्वत्र चर्चा भयो ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Interesting/हात्तीको छावालाई आमाको याद नआ`ओस् भनेर सँगै सुते उ`द्धारकर्ता, सर्वत्र चर्चा भयो !
एजेन्सी – केन्याको शेल्ड्रिक वाइल्ड`लाइफ ट्रस्टका संरक्ष`कहरू जना`वरलाई लिएर अझ बढी नै गम्भीर छन्। त्यहाँमा संर`क्षकहरू आफूले उ`द्धार गरेका जनावरहरूले कुनै चीजको कमी महसुस नगरून् भनेर जे पनि गर्न तयार हुन्छन्।
केहि समय अगाडी त्यहाँका संर`क्षकहरूले उद्धार गरिएको जेब्राले एक्लो महसुस नगरोस् भनेर कालो र सेतो सूट लगाएर बसेको समाचार बाहि`रिएको थियो। उक्त समाचार इन्टरनेटमा भाइरल नै भएको थियो भने उनीहरुको सर्वत्र चर्चा भएको थियो। अहिले त्यस्तै एक समा`चारले त्यहाँका संरक्ष`कहरू विश्व`भर चर्चाको विषय बनिरहेका छन्।
सामाजिक संजाल तथा मिडियाहरुमा यति बेला एक तस्विर चर्चित भएको छ। जसमा एक पुरुष हात्तीको छावासँग सुतिरहेका देखिएका छन्। हात्तीको छावालाई ब्ल्यांकेट ओडाइएको छ भने हात्ती र त्यहाँ रहेका व्यक्ति एक बोरालाई सिरानी बनाएर सुतिरहेका छन्।
परालमा बोरा`लाई सिरानी बनाएर आफ्ना संरक्षक हात्तीसँगै सुतेको तस्विर शेल्ड्रिक वाइ`ल्डलाइफ ट्रस्टले आफ्नो फेसबुकमा पनि शेयर गरेको छ। तस्विर शेयर गर्दै ट्रस्टले जंगली जनावरका बच्चाहरु आफ्ना आमा र बथानको सम्रक्षणमा सुत्ने हुँदै उद्धार पछि पनि त्यस्तै महसुस होस् भनेर एक संर`क्षकहरू सँगै सुतेको जनाएको छ।
सामाजिक सं`जाल फे`सबुकमा राखिएको उक्त तस्विरमा टिप्पणी गर्दै धेरैले ट्रस्टका ती संर`क्षकको प्रशं`सा गरेका छन्। तस्विरले दिल छोएको भन्दै लगभग १ हजार जनाले उक्त तस्विरमा कमेन्ट गर्दै ट्रस्टलाई धन्यवाद दिएका छन्। साथै उक्त तस्विर हजारौ पटक शेयर पनि भएको छ।